News & Media | A Bank | Reliable Commercial Bank in Myanmar
(+951) 925 3343
A bank Mobile Banking
WOW ! A bank ရဲ့ Mobile Banking ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီနော် ! A bank မှ အသုံးပြုသူ Customer များ အချိန်ကုန်သက်သာပြီး ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် A bank Mobile Banking ဝန်ဆောင်မှုစနစ်ကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ A bank ရဲ့ Mobile Banking ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပြီး မိမိ၏ ဘဏ်စာရင်းများအားစစ်ဆေးခြင်း၊ ငွေလွှဲပေးပို့ခြင်း၊ ငွေလွှဲပြောင်းခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်း တို့ကိုလွယ်ကူလျင်မြန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အပြင် (Mobile Top-Up) ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း၊ Wifi Bill နှင့် QR Pay စနစ်ဖြင့်ငွေပေးချေခြင်း တို့ကိုပါ 24/7 […]
A bank နှင့် GIZ တို့၏ Gap Analysis on IFRS readiness လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
2019 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 29 ရက်နေ့တွင် A bank ရုံးချုပ်၌ A bank နှင့် GIZ တို့၏ Gap Analysis on IFRS readiness လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအနေဖြင့် Cooperation Agreement ချုပ်ဆိုခြင်း အခမ်းအနားကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ A bank မှ CEO ဦးရဲမြတ်စိုး၊ Executive Director ဦးစောဒီနိုကူး နှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ GIZ, Banking and Financial Sector Development program မှ Head of Program, Mr. […]
” Electricity & Energy Expo 2019 ” ပြပွဲကြီးကို A bank မှ Gold Sponsor အဖြစ်ပံ့ပိုးကူညီ
မြန်မာနိုင်ငံ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဝန်ဆောင်မှုအသင်း Myanmar Oli and Gas Services Society (MOGSS) မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် Electricity and Energy Expo 2019 ပွဲအား နိုဝင်ဘာလ ၂၉ရက်နေ့မှ ဒီဇင်ဘာလ ၁ရက်နေ့အထိ တပ်မတော်ခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဖွင့်ပွဲကို ပြည်သူ့လွှတ်တော် ( လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ) ဥက္ကဌ ဦးကြည်မိုးနိုင်၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး (ငြိမ်း) ဦးအောင်ထူး ၊ ဦးအောင်ကြည်စိုး ( အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ၊ UMFCCI ) ၊ ဦးဝင်းတင် ( အတွင်းရေးမှူး ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် စီးပွါးရေးကော်မတီ) […]
Happy 4th Anniversary! 27 November 2015 – 2019 #Abank #Standing_with_you #4th_anniversary
Myanmar Entrepreneurship Summit 2019, “Entrepreneurship 4.0”
မြန်မာနိုင်ငံ လူငယ်စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MYEA) က ကြီးမှူး ကျင်းပသည့် စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် Myanmar Entrepreneurship Summit 2019, “Entrepreneurship 4.0” အခမ်းအနားကို(၁၆-၁၁-၂၀၁၉)နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ သာကေတမြို့နယ်ရှိ Fortune Plaza၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်များ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည် များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ နိုင်ငံခြားသံရုံးများ မှ သံအမတ်ကြီး များနှင့်သံတမန်များ၊ စီးပွားရေးမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ လူငယ်စွန့်ဦး တီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အသင်းသားများ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး နှင့်ပြည်နယ် များမှ […]
A Bank မှ ​တိုင်းတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့လက်​အောက်ရှိ ​တောင်သူစုစု​ပေါင်း (၉၄၁)ဦးတို့အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေ (၇၈၉)သန်း ချက်လက်မှတ်လွှဲပြောင်းပေးအပ်
တောင်သူဖွံ့ဖြိုး​ရေးအ​ဖွဲ့များနှင့် ပုဂ္ဂလိကကုန်သည်/ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တို့အကြား GAP စနစ်ဖြင့် ပဲတီစိမ်းသီးနှံစိုက်ပျိုး​ထုတ်လုပ်​ရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာ သ​ဘောတူညီချက်များလက်မှတ်​ရေးထိုးခြင်းအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့တွင် ခရမ်းသုံးခွမြို့၊ သာသနာ့ ဗိမာန်၌ ကျင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် တိုင်းတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့နှင့် မြင့်မြတ်တော်ဝင်ကုမ္ပဏီ (မကွေး) တို့မှ GAP စနစ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးသွားမည့် ပဲတီစိမ်းသီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များကို လတ်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး A Bank မှ ​တိုင်းတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့လက်​အောက်ရှိ ​တောင်သူစုစု​ပေါင်း (၉၄၁)ဦးအား စိုက်ဧကစုစု​ပေါင်း (၅၂၆၀)အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေ (၇၈၉)သန်း ချက်လက်မှတ်ကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ A bank မှတာဝန်ရှိသူများ၊ တိုင်းတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ တောင်သူများ၊ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ၊ NAG စီမံကိန်းအသီးသီးမှ လာရောက်လေ့လာသူများ […]
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှ A Bank အားဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်
GAP စနစ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးထားသည့် နှမ်းသီးနှံများ စုပေါင်းရောင်းချမှုလုပ်ငန်းအောင်ပွဲနှင့် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၉) ရက်နေ့က မကွေးတိုင်းမြို့တော်ခန်းမတွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ A bank သို့ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၌ GAP စနစ်ဖြင့်စိုက်ပျိုးထားသော နှမ်းသီးနှံများကို ကောင်းမွန်ခိုင်မာသည့် ဈေးကွက်ရရှိစေရေးအတွက် ( Public, Private, Partnership) ဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် မကွေး၊ မင်းဘူး၊ မင်းလှ နှင့် နတ်မောက်ရှိ ကျေးရွာ (၅၉) ရွာမှ တိုင်းတောင်သူဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း(RFDA) အောက်ရှိ အသင်းဝင်တောင်သူစုစုပေါင်း (၃၀၄၅) ဦးပိုင်ဆိုင်သည့် နှမ်းစိုက်ပျိုး ဧက (၁၆၁၄၂) […]
A bank မိသားစု၏ မဟာဘုံကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနား
A bank မိသားစု၏ မဟာဘုံကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၆)ရက်နေ့က ရွှေတိဂုံဘုရားအရှေ့ဘက်မုဒ်အနီးရှိ မဟာအောင်မြေဘုံမ်ကျော်ကျောင်းတိုက်တွင် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် A bank ရုံးချုပ်နှင့် ရန်ကုန်ဘဏ်ခွဲများမှ ဝန်ထမ်းများအားလုံးပူးပေါင်း၍ သံဃာတော်အပါး (၁၀၅) ပါးတို့အား ကထိန်လျာသင်္ကန်းနှင့်တကွ ဝတ္ထုအလှူငွေ၊ လှူဖွယ်ပစ္စည်းများကပ်လှူကြပြီးနောက် ကထိန်အနုမောဒနာတရားနာယူ၍ လှူဒါန်းမှုအစုစုတို့အတွက် ရေစက်သွန်းချ အမျှပေးဝေခဲ့သည်။ အခမ်းအနားအပြီးတွင် သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အား A bank မိသားစုမှ နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါသည်။
A bank မှ ” Access to Finance Champion Award ” ကိုလက်ခံရရှိခြင်း
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၈)ရက်နေ့တွင် USAID နှင့် Winrock International မှကြီးမှူးကျင်းပသည့် Market Next Event တွင် ” Access to Finance Champion Award ” ကို A bank မှလက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။A bank သည် Value Chains for Rural Development ၏သီးနှံစီမံကိန်းအားလုံးတွင် တောင်သူများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသည့်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို စီမံကိန်းဒေသအတွင်းသာမကအခြားဒေသများရှိတောင်သူများကိုပါ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်ရှိပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ထွန်းစေသောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ #Abank #Standing_with_you www.abank.com.mm #USAID #Winrock_International #MarketNext
Myanmar’s Pride ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
Myanmar’s Pride (မြန်မာ့ဂုဏ် ပွဲတော်ကြီး) မြန်မာတို့အတွက် ဂုဏ်ယူစရာအကောင်းဆုံး အခမ်းနားဆုံး ဖြစ်တဲ့ Myanmar’s Pride (မြန်မာ့ဂုဏ် ပွဲတော်ကြီး) ကို ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၄ရက်နေ့(ယနေ့) စတင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ခမ်းနားလှပတဲ့ ဝန်ကြီးများရုံးမှာကျင်းပတဲ့ Myanmar’s Pride (မြန်မာ့ဂုဏ် ပွဲတော်ကြီး) ကိုလာရောက်လေ့လာရင်း A bank ရဲ့ Photo Booth မှာအလှဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး အမှတ်တရလက်ဆောင်လေးတွေပါ ရယူဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်……… မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ခင်းကျင်းပြသမည့် “Myanmar’s Pride” ပွဲတွင် A bank မှ Gold Sponsor အဖြစ်ဂုဏ်ယူစွာပူးပေါင်းပါဝင်ထားပါသည်။ #Abank #Standing_with_you #Myanmarspride #SupportLocalProduct #မြန်မာ့ဂုဏ် […]
အခြေခံဘဏ်လုပ်ငန်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၆/၂၀၁၉) ဖွင့်ပွဲ
A bank ၏ အခြေခံဘဏ်လုပ်ငန်းသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၆/၂၀၁၉) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့ A bank – Training Center (Bayintnaung) တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ဖိတ်ကြားထားသော ဌာနဆိုင်အကြီးအကဲများနှင့် တကွ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး A bank ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးရဲမြတ်စိုး မှ အဖွင့်မှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အခြေခံဘဏ်လုပ်ငန်းသင်တန်းတွင် Banking Law & Practice , Credit , Customer Service , Trade , Core Banking […]
Myanmar’s Pride ပွဲတော်ကြီးအား A bank မှ Gold Sponsor အဖြစ်ပံ့ပိုးကူညီ
အောက်တိုဘာလ ၄၊ ၅၊ ၆ရက်များတွင် ဝန်ကြီးများရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် မြန်မာ့ဂုဏ် (Myanmar’s Pride) ပွဲတော်ကြီးတွင် A bank မှ ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် Gold Sponsor အဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင် … ဂုဏ်ယူစရာ မြန်မာ့လက်မှုပညာအခင်းအကျင်းများ ၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ၊ မြန်မာ့ထုတ်ကုန်များကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ခံစားနိုင်ရန်အတွက် ပွဲတော်ကြီးသို့လာရောက်ခဲ့ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ရင်း PB 38, PB 39 မှ စောင့်ကြိုနေမယ်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်ရှင် … #SupportLocalProduct #ပြည်တွင်းဖြစ်ကိုအားပေးပါ #myanmarspride #မြန်မာ့ဂုဏ် #goldsponsor #A_bank #Standing_with_you
တန်ဖိုးထားလေးစားအပ်ပါသော Customer များရှင်…. လူကြီးမင်းတို့၏ သွင်းကုန်/ပို့ကုန်(Import/Export) လုပ်ငန်းများအတွက် နိုင်ငံတကာနှင့် ငွေပေးချေ/ငွေလက်ခံမှုများဆောင်ရွက်ရာတွင် A bank ၏ အောက်ဖော်ပြပါဝန်ဆောင်မှုများကို ရယူ၍ အသုံးပြုနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်ရှင်…. Import LC/DA/DP Collection (၁) နိုင်ငံတကာမှ ပစ္စည်းများမှာယူ/တင်သွင်းရန်အတွက် Import Letter of Credit(LC) ဖွင့်လှစ်၍ မှာယူ/တင်သွင်းနိုင်ခြင်း။ (၂) လူကြီးမင်းတို့၏ပစ္စည်းမှာယူ/တင်သွင်းခြင်းအတွက် ပေး ချေ ရမည့်တန်ဖိုးမှလိုအပ်ငွေအချို့ကို ဘဏ်မှ ခေတ္တယာယီ စိုက်ထုတ်ပေးချေပေးခြင်း။ (၃) တဘက်နိုင်ငံ၏ဘဏ်မှပေးပို့ပေးလာသော Import Bill Documents အပေါ်အခြေခံ၍ လက်ငင်း/ဆိုင်းငံ့စနစ်ဖြင့်ငွေကောက်ခံ /ပေးချေခြင်းအားဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ (၄) လူကြီးမင်းတို့၏ကုမ္ပဏီမှ မှာယူထားသည့် ပစ္စည်းများရောက်ရှိသော်လည်း Bill of Lading […]
Samsung Note 10 နှင့် Note10+ဝယ်ယူရာတွင် လိုအပ်ချက်များနှင့် (6/12) Repayment Plan များ
မင်္ဂလာပါရှင် … Samsung Note 10 နှင့် Note 10+ အား အတိုးမဲ့အရစ်ကျဝယ်ယူရာတွင် လိုအပ်သော အချက်အလက်များနှင့် ၆လ/၁နှစ် Repayment Plan များအား အထက်ဖော်ပြပါပုံတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင် … အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို (Hire Purchase Department) ဖုန်းနံပါတ် 01 9253340 သို့ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင် … #Abank #Standing_with_you www.abank.com.mm
😊”Smile”😊 Half-Year Fixed Deposit
😊”Smile”😊 Half-Year Fixed မင်္ဂလာပါရှင် … “လှပတဲ့စိတ်ကူး… တောက်ပတဲ့အနာဂတ်အတွက်….အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? ငွေစုကြည့်ပါ….အနာဂတ်က လူကြီးမင်းလက်ထဲမှာပါ” A bank မှ ချစ်လှစွာသော Customer များအား 😊”Smile”😊Half-Year Fixed နှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေရှင် … ရက်ပေါင်း (၁၈၀) စာရင်းသေအပ်ငွေအပ်နှံရုံဖြင့် အတိုးနှုန်း 10.01% p.a ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင် … အနည်းဆုံးငွေကျပ်-၁၀၀,၀၀၀/- (ကျပ်တစ်သိန်းတိတိ)ဖြင့် စတင်စုဆောင်းနိုင်ပါပြီရှင်… Promotion ကာလကတော့ ၂.၈.၂၀၁၉ မှ ၄.၁၁.၂၀၁၉ အထိ ဖြစ်ပါသောကြောင့် လက်လွှတ်မခံဘဲအမြန်ဆုံးလာရောက်ခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင် … “အတိုး 10.01%p.a ရရှိဖို့ 😊”Smile”😊Half-Year Fixed ဖွင့်ကြစို့” #Smile #Abank […]
A bank ၏ (၁၆) ခုမြောက်ဘဏ်ခွဲဖြစ်သော သင်္ဃန်းကျွန်းဘဏ်ခွဲဖွင့်လှစ်ခြင်း
A bank ၏ (၁၆) ခုမြောက်ဘဏ်ခွဲဖြစ်သော သင်္ဃန်းကျွန်းဘဏ်ခွဲအား ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ၊ ၂ရက် (သောကြာ)နေ့ တွင် အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ငွေလွှဲနှင့် ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ကြွရောက်အားပေးကြသော A bank၏ မိတ်ဟောင်း မိတ်သစ် Customer များအား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင် … #Abank #Standing_with_you www.abank.com.mm
#သတင်းကောင်းလေးလာပါပြီရှင်….. လိုချင်တာတွေချက်ချင်းဝယ်ယူနိုင်ဖို့ A bank ၏ Hire Purchase ဝန်ဆောင်မှုရရှိစေရန် Dealership ဆိုင်ကြီးများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေရှင်… #နေပြည်တော်၊ မန္တလေးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းမှာနော်….. #လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာကုမ္ပဏီများ Good Brothters Co.,Ltd.-ဘဏ်ခွဲရှိရာမြို့များအားလုံး Alliance Victory Auto Mobile Sale & Service Co.,Ltd – နေပြည်တော် #ရွှေထည်နှင့်လက်ဝတ်ရတနာဆိုင်များ ဝိန့်ဆန်းရွှေဆိုင် – မန္တလေး စိန်ရွှေမိုး စိန်ရွှေရတနာဆိုင် – မန္တလေး အောင်သမာဓိစိန်ရွှေရတနာဆိုင်- မန္တလေး #မော်တော်ကားကုမ္ပဏီ Sein Ngwe Shan Co.,Ltd.- မန္တလေး၊နေပြည်တော် Farmer Auto Trading Co.,Ltd – […]
A bank (Hire Purchase)
#သတင်းကောင်းလေးလာပါပြီခင်ဗျာ… လိုချင်တာတွေချက်ချင်းဝယ်ယူနိုင်ဖို့ A bank ၏ Hire Purchase ဝန်ဆောင်မှုရရှိစေရန် Dealership ဆိုင်ကြီးများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေခင်ဗျာ… #ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာနော်….. #လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာကုမ္ပဏီများ Good Brothters Co.,Ltd.-ဘဏ်ခွဲရှိရာမြို ့များအားလုံး Alliance Victory Automobile Sale & Service Co.,Ltd.-ရန်ကုန် #ဆန်စက်နှင့်ဆန်စက်အပိုပစ္စည်းများ Royal Atlantic Co.,Ltd.(ချင်းတွင်းဧရာဆန်စက်အရောင်းဆိုင်) -ရန်ကုန် #စက်ယန္တရားကြီးများ နှင့် မီးစက်ကြီးများ Aung Gyi Trading Ltd.-ရန်ကုန် #ရွှေထည်နှင့်လက်ဝတ်ရတနာဆိုင်များ အောင်သမာဓိစိန်ရွှေရတနာဆိုင်-ရန်ကုန် Lady Grace Jewellary- ရန်ကုန် #မော်တော်ကားကုမ္ပဏီ Sein Ngwe Shan Co.,Ltd.-ရန်ကုန် Farmer Auto Trading […]
မင်္ဂလာပါရှင် … A bank ၏ စာရင်းသေအပ်ငွေအမျိုးအစားများနှင့်သက်တမ်း အသီးသီးအလိုက် အတိုးနှုန်းများကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေရှင် … #Abank #Standing_with_you www.abank.com.mm
A bank (CSR Activity)
A bank ဝန်ထမ်းမိသားစု၏ လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်း CSR Activities လှုပ်ရှားမှုအနေဖြင့် (၁၁.၇.၂၀၁၉) ကြာသပတေးနေ့တွင် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးရှိ ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောခွဲစိတ်ကုသဌာနတွင် နေ့လည်စာအာဟာရဒါနအဖြစ် လူအယောက် (၃၀၀) စာ အလှူဒါန ပြုလုပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ #Abank #CSR #Standing_with_you www.abank.com.mm
မူဆယ်မြို့နယ် ရှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီသို့ A bank ဥက္ကဌမှ ငွေကျပ် သိန်းနှစ်ဆယ်လှုဒါန်းခြင်း
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၅ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်သော A bank မူဆယ်ဘဏ်ခွဲဖွင့်ပွဲတွင် A bank ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဝင်းရှိန်မှ မူဆယ်မြို့နယ် ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီသို့ ငွေကျပ် သိန်း နှစ်ဆယ် လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းမှ မူဆယ်မြို့အဝင် မုခ်ဦး ပန်းချီကားချပ်အား ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင် အဖြစ် ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်ရှင် … #Abank #Standing_with_you www.abank.com.mm
A bank မူဆယ်ဘဏ်ခွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
A bank ၏ (၁၅) ခုမြောက်ဖြစ်သော မူဆယ်ဘဏ်ခွဲအား ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၊ ၂၅ရက်နေ့ (အင်္ဂါနေ့) တွင် အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်ပြီး ငွေလွှဲနှင့် ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ကြွရောက်အားပေးကြသော A bank၏ မိတ်ဟောင်း မိတ်သစ် Customer များအား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင် … #Abank #Standing_with_you www.abank.com.mm
Savings Deposit ငွေစုဘဏ်စာရင်းအပ်ငွေ
Savings Deposit အမြင့်မားဆုံး အတိုးနှုန်း 8.7% ရတဲ့ A bank မှာ ငွေစုကြရအောင်….. #Abank #Standing_with_you www.abank.com.mm
(၃၆၅) ရက်စာရင်းသေအပ်ငွေ ရွေးချယ်မှုပုံစံ(၂) မျိုး
#Fixed_deposit ရက်ရှည် ငွေစုဆောင်းလိုသူများအတွက် စာရင်းသေအပ်ငွေပုံစံ (၂)မျိုးနှင့် မိတ်ဆက်ပေးပါရစေရှင် … (#လစဉ်အတိုးထုတ်ယူလိုသူများအတွက်) အတိုးငွေအား လစဉ်လကုန်ဆုံးသည့်နေ့အထိ တွက်ချက်ပေးပြီး လကုန်ပြီးနောက်ရက်တွင် အတိုးထုတ်ပေးသည့် ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါသည်။ ရက်ပေါင်း (၃၆၅)ရက် အပ်နံှပြီး အတိုးနှုန်း ၉.၆% p.a ခံစားရရှိနိုင်ပါသည်။ (#သတ်မှတ်ကာလပြည့်သောအခါမှအတိုးထုတ်ယူလိုသူများအတွက်) ရက်ပေါင်း (၃၆၅) ရက် အပ်နံှပြီး အတိုးနှုန်း ၁၀% p.a ခံစားရရှိနိုင်ပါသည်။ အတိုးငွေအား သတ်မှတ်ကာလ ပြည့်ချိန်တွင် ထုတ်ယူနိုင်မည့် စာရင်းသေအပ်ငွေပုံစံ တို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင် … လူကြီးမင်းတို့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်မှုပုံစံဖြင့် ငွေများများစုပြီး အတိုးများများရအောင် A bank သို့ လှမ်းလာခဲ့ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင် … #Abank #Standing_with_you […]
A bank ထူးကြီးဘဏ်ခွဲ ဖွင့်လှစ်ခြင်း
2019 ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ 26 ရက်နေ့တွင် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ အင်္ဂပူမြို့နယ်ရှိ ထူးကြီးမြို့တွင် A bank ၏ ဘဏ်ခွဲအသစ်ဖြစ်သော “ထူးကြီးဘဏ်ခွဲ” ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း အခမ်းအနားတွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘိုဘိုဇင်၊ ထူးကြီးမြို့၏ မြို့မိမြို့ဖဖြစ်သော ဦးအောင်မင်းစိုး၊ A bank ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးအာယု၊ A bank အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးရဲမြတ်စိုး နှင့် A bank အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဦးရဲထွန်းဦး တို့ မှ တက်ရောက်၍ ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြပါသည်။ ထူးကြီးဘဏ်ခွဲဖွင့်ပွဲသို့ တက်ရောက်အားပေးခဲ့ကြသော A bank ၏ မိတ်ဟောင်း မိတ်သစ် Customer […]
Suite No # 12-09/10, Level -12, Junction City Tower, No.3A, Corner of Bogyoke Aung San Road and 27th Street, Pabedan Tsp,Yangon, Myanmar.
(+951) 925 3343, (+951) 925 3344
(+951) 925 3345
(+95-1) 925 3341
(+95-9) 780 227 722 ( Hotline )